2 Mpanjaka 9 - Ny Baiboly
2 Mpanjaka toko 9
Ny nanosorana an'i Jeho ho mpanjakan'Israely - Ny namonoana an'i Jorama mpanjakan'Israely - Okoziasa mpanjakan'i Jodà ary Jezabela.
1Ary niantso ny anankiray amin'ny zanaky ny mpaminany Elisea mpaminany, ka nanao hoe: Misikina hianao; raiso eo an-tànanao ity tavoara misy diloilo ity, ka mankanesa any Ramota any Galaada. 2Rahefa tonga any hianao, zahao Jeho zanak'i Josafata zanak'i Namsì, ka rahefa tafahatona eo anilany dia asaovy hitsangana avy eo amin'ireo rahalahiny izy, dia ento mankany an'efitrano mangingina, 3ary raiso ny tavoara misy diloilo, aidino amin'ny lohany, ka ataovy hoe: Izao no lazain'ny Tompo: Hosorako ho mpanjakan'Israely hianao. Dia vohay ny varavarana ka mandosira fa aza mijanonjanona.
4Dia nandeha ilay zatovo, mpanompon'ny mpaminany, ho any Ramota, any Galaada. 5Nony tonga izy, indreo ny lehiben'ny tafika mipetraka eo, ka hoy izy: Ry Komandy ô, misy teny kely holazaiko aminao. Ary hoy Jeho: Amin'iza aminay ireto? Dia namaly izy: Aminao, Komandy. 6Koa nitsangana nankao an-trano Jeho, ary ilay zatovo kosa sady nanidina ny diloilo tamin'ny lohany no nanao taminy hoe: Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitr'Israely: Hosorako ho mpanjakan'Israely vahoakan'ny Tompo hianao. 7Hamely ny tranon'i Akaba tomponao hianao, ary hampanodiaviko an'i Jezabela ny ran'ny mpaminany mpanompoko, sy ny ran'ny mpanompon'ny Tompo rehetra. 8Haringana ny tranon'i Akaba rehetra, hofongorako ny lahy rehetra izay an'i Akaba, na ny manompo olona na ny olona afaka amin'Israely, 9ka hampanahafiko ny tranon'i Jeroboama zanak'i Nabata sy ny an'i Baasa zanak'i Ahia, ny tranon'i Akaba. 10Hohanin'ny alika eo amin'ny sahan'i Jezrahela Jezabela, ary tsy hisy olona handevina azy. Dia novohan'ilay zatovo ny varavarana, ka lasa nandositra izy.
11Fa Jeho kosa nivoaka nankao amin'ny mpanompon'ny tompony, ka hoy ireo taminy hoe: Tsara ihany daholo va? Fa ahoana no nalehan'ilay adala iny tao aminao? Dia hoy ny navaliny azy ireo: Samy fantatrareo ihany, na ralehilahy na ny teniny. 12Fa namaly izy ireo nanao hoe: Lainga izany, fa ambarao aminay izany! Ary hoy izy hoe: Izany sy izany no nolazainy tamiko, nataony hoe: izao no lazain'ny Tompo: Hosorako ho mpanjakan'Israely hianao. 13Niaraka tamin'izay samy nandray ny kapaotiny avy izy ireo sy nanao azy teo ambanin'i Jeho, teo an-tampon'ny ambaratonga; dia notsofiny ny anjomara, ka hoy izy: Jeho no mpanjaka! 14Nanao teti-dratsy Jeho zanak'i Josafata, zanak'i Namsì, hamely an'i Jorama. Jorama sy Israely rehetra tamin'izany, dia niaro an'i Ramota any Galaada, tsy ho azon'i Hazaela mpanjakan'i Siria, 15saingy niverina nankany Jezrahela Jorama mpanjaka hampitsabo tena amin'ny ratra nahavoazan'ny Siriana azy, tamin'izy niady tamin'i Hazaela mpanjakan'i Siria. Ka hoy Jeho: Raha maniry izany ary hianareo, aza misy mitsoaka eto an-tanàna ny olona, ka andeha hilaza izany any Jezrahela. 16Dia niakatra teo amin'ny kalesiny Jeho, ka niainga nankany Jezrahela, fa nandry tany Jorama, ary nidina namangy an'i Jorama any koa Okoziasa mpanjakan'i Jodà.
17Tazan'ny mpitily nitoetra tao an-tampon'ny tilikambon'i Jezrahela kosa ny nihavian'ny antoko-miaramilan'i Jeho ka nolazainy hoe: Mahatazana antoko-miaramila aho. Ary hoy Jorama: Makà mpitaingin-tsoavaly anankiray, iraho hitsena azy ireo ka hanontany hoe: Fihavanana va izao? 18Dia nandeha nitsena an'i Jeho ny mpitaingin-tsoavaly, ka nanao hoe: Izao no lazain'ny mpanjaka: Fihavanana va izao? Fa namaly Jeho nanao hoe: Mampaninona anao izay fihavanana? Fa avia aty aoriako hianao! Nampandre izany ny mpitily nanao hoe: Lasa tafapaka teny aminy ny iraka, nefa tsy niverina. 19Dia naniraka mpitaingin-tsoavaly fanindroany Jorama; ka tonga teny izy ary nanao hoe: Izao no lazain'ny mpanjaka: Fihavanana va izao? Fa namaly Jeho nanao hoe: Mampaninona anao izay fihavanana? Avia atý aoriako hianao! 20Koa nampandre izany ny mpitily nanao hoe: Lasa tafapaka teny aminy ny iraka nefa tsy niverina. Sahala amin'ny fitarik'i Jeho zanak'i Namsì ny fitariny, fa nitarika toy ny olona adala izy. 21Dia hoy Jorama: Ataovy amin'ny kalesy ny soavaly. Dia natao tamin'ny kalesiny ny soavaly. Nivoaka samy tamin'ny kalesiny avy, Jorama mpanjakan'Israely, sy Okoziasa, mpanjakan'i Jodà, nivoaka nitsena an'i Jeho, ka nifanena taminy tao amin'ny sahan'i Nabota, any Jezrahela. 22Raha nahita an'i Jeho Jorama, dia nanao taminy hoe: Fihavanana va izao, ry Jeho? Fa namaly kosa Jeho: Inona no ho fihavanana eo raha mbola maharitra koa ny fijangajangan'i Jezabela reninao sy ny vorika betsaka ataony? 23Dia nampihodina ny kalesiny Jorama, nitsoaka nandositra, sady nilaza tamin'i Okoziasa hoe: Fivadihana ity, ry Okoziasa. 24Fa noraisin'i Jeho teo an-tànany kosa ny tsipìkany, nasiany Jorama teo anelanelan'ny sorony; tafagorobaka tamin'ny fony ny zana-tsipìka, ka nitambotsitra tao anaty kalesiny tao Jorama. 25Ary hoy Jeho tamin'i Badakera lefiny: Raiso io, atsipazo ao amin'ny sahan'i Nabota ao Jezrahela, satria tsarovy ilay izaho sy hianao niara-nitaingin-tsoavaly nanaraka an'i Akaba iny, ka nitenenan'ny Tompo izao teny nihatra taminy izao hoe: 26Marina fa toy ny nahitako omaly ny ran'i Nabota sy ny ran-janany, - teny marin'ny Tompo izao, - dia hataoko ho todin'izany hianao ato amin'ity saha ity ihany, - teny marin'ny Tompo izao; - koa raiso io, atsipazo amin'ny saha araka ny tenin'ny Tompo.
27Raha nahita izany Okoziasa mpanjakan'i Jodà, dia nandositra tamin'ny làlan'ny tranon'ny zaridaina. Fa nenjehin'i Jeho izy sady nataony hoe: Asio ao anaty kalesiny ao ihany koa iny. Dia nasian'ny olona izy, teo amin'ny fiakaran'i Gavera, akaikin'i Jeblaama. Nandositra nankany Magedao izy, dia maty tao. 28Nentin'ny mpanompony tamin'ny kalesy ho any Jerosalema izy, ka naleviny tao am-pasany, tao amin'ny razany, ao an-tanànan'i Davida. 29Tamin'ny taona faharaika ambin'ny folon'ny nanjakan'i Jorama, zanak'i Akaba, no nahatongavan'i Okoziasa ho mpanjakan'i Jodà.
30Dia niditra tao Jezrahela Jeho. Raha nandre izany Jezabela dia notentenany ny masony, noravahany ny lohany, ka nitsidika teo am-baravarankely izy. 31Nony niditra ny vavahady Jeho dia hoy izy: Fihavanana va izao, ry Zamrì, mpamono tompo? 32Niandrandra tany am-baravarankely izy, dia nanao hoe: Iza no momba ahy? Iza? Eonoka roa na telo no nitsirika avy, 33dia nataony hoe: Azerao atý ambany izy io! Dia nazeran'ireo izy, ka nifantsitsitra tamin'ny rindrina sy ny soavaly ny rany, ary nohosen'i Jeho tamin'ny tongony izy. 34Rahefa izany dia niditra izy ary nihinana sy nisotro ka nanao hoe: Mandehana tsiriho ilay vehivavy voaozona dia aleveno, fa zanaky ny mpanjaka izy. 35Dia nandeha handevina azy izy ireo, kanjo ny karan-dohany sy ny tongony aman-pelatanany sisa tratrany teo. 36Ka niverina nilaza izany tamin'i Jeho izy, fa hoy izy: Izany no tenin'ny Tompo notononiny tamin'ny alàlan'i Elia Tesbita, nataony hoe: Hohanin'ny alika ao amin'ny sahan'i Jezrahela ny nofon'i Jezabela, ary hanahaka ny zezika eo ambonin'ny tany ao amin'ny sahan'i Jezrahela ny fatin'i Jezabela, ka tsy ho azo lazaina akory hoe: Jezabela ity. >